Urur muslimiinta naceb oo ku kulmaya Stockholm - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Urur muslimiinta naceb oo ku kulmaya Stockholm
La daabacay fredag 3 augusti 2012 kl 09.53
Berito oo ay xaflada pride-festival ka sacoto Stockholm ayaa hadana dhanka kale waxaa magaalada kulan ku qabsan doona dhaqdhaqaaq la yiraahdo Counter jihad oo ah dhaqdhaqaaq ka soo horjeda muslimiinta.
Sida ay sheegeen qaban qaabiyaasho kulankaan ayaa ah kii ugu horeyey oo caalamiya oo ay dhaqdhaqaaqo Counter Jihad qabtaan.” halkaas oo ay ka hadli doonaan magacyo si weyn loo garanayo. Kulankaan ayaa koxdaan qaymo weyn ugu fadhiyi kara, sidaas waxaa oranaysa Lisa Bjurwald oo ah saxaafiyad boog ka qortay xag jiriinta midig ee Yurub.
Kooxaha noocaan ah aad bay ugu fiicanyahiin in ay isku sameeyaan xayeysiin, aadbayna ugu fiicanyahiin in ay propaganda samaystaan oo ay iska dhigaan waxa aysan ahayn. Hadii sbtida kulankooda dhaco waxaa la orankaraa waa isku day caalamiya, ayey tiri Lisa Bjurwald.
Sidoo kale waxaa ka soo qab-galaya hogaamiyaha dhaqdhaqaaq mudaharaad ka dhiga wadooyinka Ingriiska oo la yiraahdo English Defence Leage. Isku darka dadyow fikarka curiya iyo kuwa wadooyinka ka halgamaya ayaa ka dhigaya dhaqdhaqaaqaan mid gaarkiis ah. Ayey leedahay Lisa Bjureald.
- Dhaqaaqaan waxaa kamid ah qoraayaal badan oo gada bogaag badan oo ay dadka caadigaa gadtaan iyo kuwo qora bloggar ay dad badan ku xiranyahiin, dad xiriir la leh dhaqdhaqaaqa maraykanka ee Tea-party, iyo kuwo waxaas oo dhan banaanka ka ah oo ah burcad rabshoo layaal ah. English Defence League waxaa ka trisan dad horay u ahaan jiray Hilgangs iyo nazist, ayey tiri.